Soterre ee Qlik Sense
Soterre loogu talagalay Tableau
MotioCAP - Xaqiijinta Cognos
Falanqaynta IBM Cognos
Xakamaynta Qaybta & Diritaanka
Imtixaanka Xamuulka & Cadaadiska
Kormeer iyo digniin
Wixii Qlik ah
Loogu talagalay Tableau
Blog BI & Falanqaynta
Siinta Kooxdaada Faa'iido Falanqeyn Joogta ah
Motio wuxuu si otomaatig ah u hagaajiyaa hawlaha BI ee maamulka ee daallan wuxuuna hagaajiyaa hababka horumarinta BI ee qallafsan si loogu oggolaado Khubarada Falanqaynta inay xoogga saaraan waxa ay ku fiican yihiin: gaarsiinta sirdoon firfircoon maamulayaasha ganacsiga si ay u siiyaan sawirka buuxa ee ganacsigooda.
OGOW MOTIOCI Macaamiisha
Siideynta cusub ee MotioCI (nooca 3.2.10 FL9) waa diyaar si loo soo dejiyo.
Hagaajinta Cayayaanka Muhiimka ah:
Waxay wax ka qabataa nuglaanta Log4j2 ee muhiimka ah CVE-2021-45105 iyadoo la cusboonaysiinayo Log4j2 v2.17.
Tani waa hagaajinta oo wax yareyn looma baahna marka macaamiishu u cusboonaysiiyaan nooca cusub ee la sii daayay MotioCI. Haddii macaamiishu ay horey u raaceen tillaabooyinka halkeena Maqaalka KB halkan, maaha inay kor u qaadaan si arrimaha loo yareeyo. Haddii shuruudaha amniga ee ururkaagu u baahan yahay in la cusboonaysiiyo v.2.17 markaas casriyaynta ayaa loo baahan doonaa in la sameeyo.
Download MotioCI 3.2.10 FL9 (Motio Koontada website-ka ayaa loo baahan yahay).
FIIRO GAAR AH: Tani ma saameynayso mid kale Motio software- MotioPI, MotioCAP, PersonaIQ, Reportcard or Soterre
Motio Taageeradu waxay halkan u joogtaa inay kaa caawiso lacag la'aan kor u qaadidaada 3.2.10 FL9 xiriirka Motio Taageerada.
Dhacdooyinka iyo Webinars
Ma Ogtahay Taageerada Bilaashka Ah Ee Gitoqlok inay Bilaash tahay?
Haddii aad hore u isticmaalaysay Gitoqlok, plugin-ka bilaashka ah ee Qlik Sense kaas oo si toos ah u geliya walxaha muuqaalka ah iyo qoraallada xogta ee biraawsarkaaga, ka dib iska hubi inaad iska diiwaan geliso taageerada qaaliga ah! Gebi ahaanba waa bilaash!
Soo Dhawaynta Farqiga u Leh Waayo-aragnimada Dareenka Qlik Aan Xun
Waxaad doonaysaa socodka shaqo ee aan kala go' lahayn oo leh Qlik Sense. Sideed ku timaadaa?
Diyaar ma u tahay inaad barato sida aad khibradaada Qlik Sense uga dhigi lahayd mid hufan adigoo isticmaalaya otomaatiga iyadoo la ilaalinayo u hogaansanaanta iyo heerarka ururka? Khubaradayadu waxay sharxi doonaan sida loo Qlik si kalsooni leh iyada oo aan culeys maamul ama xad dhaaf ah.
Waxaan rabnaa inaan kaa caawino sidii aad u xallin lahayd dhibaatooyinkaaga BI! Aan ku xirno mid ka mid ah dhacdooyinkan soo socda iyo webinars.
Eeg Dhammaan Dhacdooyinka & Webinarrada
Xalkayaga softiweerku wuxuu kaa caawinayaa inaad ku guuleysato BI ee Cognos Analytics, Qlik, iyo Falanqaynta Qorshaynta Waxaa xoojiyay TM1.
Iyadoo Motio® software dhinacaaga ah, waxaad ku kasban doontaa hufnaan shaqadaada, wanaajin doontaa tayada iyo saxnaanta hantida macluumaadka, kordhineysa waxqabadka madal, ku gaari kartaa waqti dhaqso suuqa, oo aad maamuli doontaa hababka maareynta.
Xalalka fududeynta kor u qaadista Cognos, geynta, xakamaynta nuqulka & maareynta isbeddelka, otomatiga howlaha tijaabada & maamulka, hagaajinta waxqabadka, awood u siinta CAP & SAML, iyo guuritaanka/beddelka magacyada.
Xalka xakamaynta nooca iyo maaraynta isbeddelka ee Qlik iyo hagaajinta hufnaanta hawlgelinta.
Falanqaynta Qorsheynta IBM
Xalalka xakamaynta nooca iyo maareynta isbeddelka ee Cognos TM1 & Falanqaynta Qorsheynta, fududeynta hawsha dejinta, hagaajinta hawlaha maamulka iyo maareynta isbeddelada amniga.
Sheekooyinka Guusha Macaamiisha
Ha u qaadan eraygayaga uun. Akhri macaamiishayada iyo sida Motio waxay ka caawisay inay hagaajiyaan aagaggooda falanqaynta waxayna keydiyaan waqti iyo lacag qiimo leh.
Miyaad Taqaanaa Cognos -yadu inay Sare u Qaadaan Dhaqanka ugu Fiican?
Sanado badan Motio,. Waxaan abuurnay kuwan annaga oo fulinay in ka badan 500 hirgelin iyo dhegeysiga waxa ay macaamiisheena leeyihiin. Haddii aad ka mid tahay in ka badan 600 oo qof oo ka soo qeyb galay mid ka mid ah ...
Motio, Inc. Hesho Gitoqlok
Motio, Inc. Waxay Heshaa Gitoqlok Iskugu Keenaya Xakamaynta Nooca Xoogan Iyadoon Lahayn Caqabadaha Farsamada PLANO, Texas - 13 Oktoobar 2021 - Motio, Inc., shirkadda softiweerka ee kaa caawineysa inaad sii waddo faa'iidada falanqaynta adiga oo ka dhigaya sirdoonkaaga ganacsiga iyo falanqaynta ...
Markaa Waxaad Go'aansatay inaad Kor U Qaaddo Cognos… Hadda Maxaa?
Haddii aad muddo dheer tahay Motio raacaha, waxaad ogaan doontaa inaannaan ku cusubayn casriyeynta Cognos. (Haddii aad ku cusub tahay Motio, soo dhawoow! Waan ku faraxsanahay inaan ku helno) Waxaa naloogu yeeray “Chip & Joanna Gains” ee Cognos Casriyeynta. Hagaag jumlada u dambaysa waa buunbuunin, ...
Ha Cabsanina, Kor -u -qaadista Cognos -ka Fudud ayaa Jirta
Kooxda CoBank waxay ku tiirsan tahay Cognos warbixinteeda hawlgalka iyo nidaamka warbixinta maaliyadeed ee ugu weyn. Ku -haynta Cognos -ka oo la casriyeeyo waxay u oggolaanaysaa inay sii wadaan is -dhexgalka aaladaha kale ee BI iyo nidaamyadooda. Kooxdu waxay ka kooban tahay 600 oo adeegsadeyaal ganacsi ah oo sacab muggiis ah ay ku horumarinayaan warbixintooda meel bannaan "My Content".
Kooxda Isticmaalaha Virtual Cognos - Waqooyiga Texas
Markaad maqasho ereyga, “Texas” maxaa maankaaga ku soo dhacaya? Waxaa laga yaabaa inay tahay koofiyadaha toban-gallon, kabaha lo'da, barbeque, kobcinta waxqabadka Cognos! Hagaag, malaha aaladda BI ee aad ugu jeceshahay ma aha maskaxda sare, laakiin waa inay ahaataa! Markii ugu horreysay abid, Motio waxay martigelineysaa Waqooyiga dalwaddii ...
Eeg Dhammaan Daraasadaha Kiiska
Read Motio sheyga “sida loo sameeyo,” hababka ugu wanaagsan ee BI & isbeddellada warshadaha, iyo inbadan.
blogFalanqaynta CognosCasriyeynta WarshaddacasriyayntaKor u qaadista Cognos
blogTaariikhda Motio Motio QaadSoterre
Motio, Inc. Waxay Heshaa Gitoqlok Iskugu Keenaya Xakamaynta Nooca Xoogan Iyadoon Lahayn Caqabadaha Farsamada PLANO, Texas - 13 Oktoobar 2021 - Motio, Inc., shirkadda softiweerka ee kaa caawisa inaad sii waddo faa'iidada falanqaynta adiga oo ka dhigaya sirdoonka ganacsigaaga iyo ...
Diyaar ma u tahay inaad toosiso oo aad otomaatigiso aaladahaaga BI & falanqaynta?
Download MotioPI Freeware. Ama codso MotioPI ama MotioCI si bilaash ah loogu isticmaalo kor u qaadistaaga Cognos Analytics.
Lacag la'aan: 1 (877) 362-8708
© 2021 Motio. All rights reserved ● Shuruudaha iyo Xaaladaha ● Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah